puza Pariyar's Likes - MeroReport
puza Pariyar's Likes
Back to puza Pariyar's Page
१४ वर्षीया आमा र छोरीको बिचल्ली मनिसलाई जन्मिएदेखि नमरुन्जेल सहयोग र सहाराको आवश्यकता पर्छ, तर समाजमा सहयोगको चर्को नारा लगाउनेहरू धेरै भए पनि सहारा दिने प्रायः भेटिँदैनन्। यसको उदाहरण बनेकी छिन् एक जना १४ वर्षीया आमा। बर्दिया सान… Discussion १४ वर्षीया आमा र छोरीको बिचल्ली4Likes के सही के गलत? - प्रश्नहरुमा रुमल्लीएका थप प्
म हिजोआज बिभिन्न प्रश्नहरुले घेरिएको छु । कहिलेकाँही मलाई आफ्नो भविष्यलाई नै प्रभावित पार्नेगरी अनपेक्षित प्रश्नहरुले घोच्छन् । कहिले परिवारका सदस्य तथा साथीभाईहरु प्रश्नहरुको झोला बोकेर मसँग…
Blog के सही के गलत? - प्रश्नहरुमा रुमल्लीएका थप प्4Likes
रुकुम यात्रा । यात्रा संस्मरण–भाग १
पत्रकारहरु माथि भएका…
Blog रुकुम यात्रा । यात्रा संस्मरण–भाग १ 14 Likes आफ्नै शब्द ।
मुलधारको पत्रकारिता पेशा नगरेको ठ्याक्कै ४ बर्ष नाघेछ । यसविचमा एउटा उपलब्धी भनेको आमसंचार तथा पत्रकारितामा एमए चाहिँ गरिएकै हो । तर मनको धोको पुग्नेगरी पत्रकारिता गर्ने रहर हुँदाहुँदै मुलधारको…
Blog आफ्नै शब्द ।7Likes गाईजात्रा र नयाँनेपाल ।
साउन २९ गते आईतबार, आईतबार परेकोले मेरो अफिस त्यसैपनि बिदा थियो । त्यसमाथि उपत्यकाका लागि ‘बिशेष’ बिदा समेत दिईएको थियो कारण; त्यसदिन…
Blog गाईजात्रा र नयाँनेपाल ।5Likes सुर्खेतमा साहित्य महोत्सव हुने ।
सुर्खेतका साहित्यकारहरुको भेलाले यहि असार १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म सुर्खेतमा गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय साहित्य महोत्सवको अन्तिम तयारी लगभग पुरा भएको छ ।
महोत्सवमा देशका तीन सय भन्दा धेरै…
Blog सुर्खेतमा साहित्य महोत्सव हुने ।2Likes Nepali Heroin video Nepali Heroin3Likes
विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि जनचेतना कार्यक्रम
वैशाख ११ गते शनिवार, महालक्ष्मी नगरपालिकाको लुभुमा, २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पको सन्दर्भ र उक्त भूकम्पमा परेर दिवंगत हुनुभएकाहरुको सम्झना तथा चीर शान्तीका लागि महालक्ष्मी नगरपालिका र…
Blog विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि जनचेतना कार्यक्रम2Likes हावाको बिजुली र हावादारी गफ
लोडसेडिङले आक्रान्त अवस्थामा रहेको देशका हामी नागरिकलाई गत माघ १५ गते शुक्रबारको सचिवस्तरीय सम्झौताले नेपालमा भारतबाट थप विद्युत् आयात हुने भनेपछि केही खुसी छाएको थियो । अर्थ मन्त्रीले नै…
Blog हावाको बिजुली र हावादारी गफ2Likes रामनामी सल ओढेका सामाजिक फ्रडहरु
३१ डिग्री तातो घाम, कोटेश्वरको बसपार्क छेउ । मिती ४ जेठ हुनुपर्छ । मध्यघाम, मध्यान्ह १२ बजे । झट्ट हेर्दा १७ की जस्तो देखिने किशोरी झोला सिरानी हालेर तीनकुनेपट्टि क्वाँक्वाँ रूँदै थिइन् । पुरानो र…
Blog रामनामी सल ओढेका सामाजिक फ्रडहरु2Likes puza Pariyar Member puza Pariyar3Likes
one day with chinese sister in red saree photo one day with chinese sister in red saree 1 Like
truth यो दुनियाँमा मान्छेले सबै कुराहरु भेटाउँछन केवल एउटा कुरा भेटिंदैन स्विकार अनि महशुस पनि गरिंदैन त्यो हो - आफुले गरेको 'गल्ती' । Discussion truth6Likes माईखोला तरेपछि
“सिस्टर घरमा श्रीमती र अढाई बर्षीया छोरी छिन । के गर्दै होलान् ? मेरो यस्तो हालत थाहा पायो भने मुर्छा पर्छन्, सिस्टर मुर्छा ।” लर्वरिएको आवाजमा विप्लप बोल्यो । विप्लपको आर्तनादलाई सान्तवाना…
Blog माईखोला तरेपछि3Likes मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर भएका साताका ब्लगर… मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर भएका साताका ब्लगरहरु: प्रमोद भट्टराई बिना भट्टराई युमेश पुलामी निश्चल चापागाईँ गणेश पाैडेल सन्तोष कुमार पौड्याल विशेष संगत सौगात गौतम रामकृष्ण पाैडेल प्रसित घिमिरे बसु… Page मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर भएका साताका ब्लगर… 13 Likes प्रबास र काम
“जर्मन भाषा बोल्न आउँछ?” मैले प्रश्न सोझ्याएँ ।
“अँअहँ ।” एकछिन छेऊकोसाथीसँग मुखामुख गरेर हाँस्दै र…
Blog प्रबास र काम4Likes
मेरो लागि आइतबार
बिगतको त्यो दिन मेरो लागि आज पनि उस्तै छ । जब म त्यो दिनलाई सम्झन्छु तब मनमा कताकता डर लागेर आउँछ अनी अनायासै आँखाहरु रसाउन थाल्छन् । आज फेरि मलाई त्यो दिनको याद आयो…
Blog मेरो लागि आइतबार2Likes